Akanaka Matema eChishanu Deals - Mhanya Vasati Vatengesa! | Linux Vakapindwa muropa
El 2020 Nhema Chishanu asvika. Iwe unotova nehuwandu hwezvibvumirano pamunwe wako zvausingakwanise kupotsa. Nekudaro, kunge zombie ine nzara yenyama yemunhu, iwe unofanirwa kukurumidza kutora izvo zvese zvigadzirwa zve tech zvaunoda. Zvikasadaro, iwe unopera sosi nekukurumidza ...
Tora mukana weizvi zvikwaniso kuti ukwanise kuzvifadza, icho chinhu icho chawanga uchitsvaga kutenga kwemwedzi asi chausina kuita nekuda kwezvikonzero zvehupfumi. Kana pamwe, shamisa mumwe wako, nhengo yemhuri kana shamwari nekushamisika kupenya rino rakaoma gore. Uye kunyange, kufambira mberi kutenga yezvipo zveKisimusi kuitira kuti nzombe isakubate, kunyanya gore rino, iro nezvirambidzo nekuwandisa kwevanotakura varume, zvinogona kutora nguva yakareba kana ukavasiya kweminiti yekupedzisira ...
PaAmazon iwe uchawana kuwanda kwezvikomberedzo zvinogona kubva kubva ku20% mune dzimwe nguva, kusvika pamwero wakakwira chaizvo mune vamwe. Saka, usapfuure izvi zvikwiriso zvigadzirwa zvemagetsi. Uye rangarira, izvi zvakasarudzika zveChishanu zveChishanu zvinongogara kwemaawa makumi maviri nemana, uye zvigadzirwa zvinowanzozotengesa kunze nekukurumidza mune zvimwe zviitiko. Saka, iwe unoziva ... Brainbreaks! … Ndinoreva, Ofeeeertas!
1 Zvigadzirwa zveAmazon
2 Makomputa, zvemagetsi, mafoni uye zvishongedzo
3 Imba yakangwara nemidziyo
Kana iwe uchida Zvigadzirwa zveAmazon, paChishanu Chishanu unogona kuzvitengera zvakachipa kwazvo, kune Smart Home uye yako multimedia kunakirwa:
Echo Ratidza 8: ponesa 50%, inenge € 65 shoma, yekutenga ino smart screen ine Alexa. Google payakaburitsa vhezheni yayo nechiratidziri chemubatsiri wayo, Amazon yakaitawo zvimwe chete kuti iunze mubatsiri anonyanya kufarirwa uye wepamberi kune mudziyo une skrini. Mhedzisiro yacho iyi Echo Ratidza 8, iyo iwe yaunogona kuita chaizvo zvakafanana neiyo Echo smart mutauri, asi ine skrini paunogona kuona zvemukati. Semuenzaniso, unogona kukumbira Alexa kuti ikuratidze nzira yekubikisa paYouTube, kana kuratidza mifananidzo, nezvimwe. Ehezve, inowiriranawo nemamwe marongedzero epamba dzimba
Kindle Oasis: iwe ikozvino une 24% kuchengetedza (-60 €) kuitira kuti unakirwe nekuverenga kwako neiyi muverengi wee-eBook. Chishandiso chakanakisa chekuchengetedza zviuru zvemabhuku edhijitari kubva kuchitoro cheAmazon uye zvimwe zvinyorwa, ine 7 ″ yekubata skrini ye e-Ink, uye ine akanakisa maficha pamusika. Ine IPX8 chengetedzo inodzivirirwa pamvura. Uyezve, bhatiri rayo rinogona kupera kusvika kumavhiki e6 pane chaji imwechete. Kana iwe uchida kuverenga bhuku, iwe unofanirwa kuwana zvakanakisa zvese ...
Echo Dot (4th chizvarwa): neichi Chishanu Chipo chinopa. Kana iwe usingade iyo Echo Ratidza uye uchida chete kurira, uyu wechina-gen Alexa smart mutauri ndeimwe yeakanakisa chitoro chaanopa. Uye zvakare, iwe hausi chete nekuchengetedza kwe30%, iwe zvakare unosanganisira Philips brand brand LED smart bulb mune kit. Mubatsiri wayo achakubatsira mune kuwanda kwemabasa nehunyanzvi hwayo, uye inoenderana nemidziyo yekumba yakangwara (Zigbee protocol).
Auto Echo: ponesa 42% ine dhisikaundi pane ino kifaa. Iwe unogona zvakare kuunza maficha eakachenjera mutauri uye Alexa kumota yako. Ichi chishandiso chinokutendera iwe kuti uite mota yako kunyangwe kungwara. Izwi raAlexa rinonzwika kuburikidza nematauri emota yako, uye unogona kurishandisa nemirairo yezwi, kunge isina maoko. Tarisa mibvunzo yako, kana kumubvunza kuti aridze mimhanzi yako yaunofarira, nezvimwe. Alexa ichakupa iwe ...
Amazon eero (mesh): ponesa kupfuura € 111 (40% dhisikaundi) mune ino network kititi kit. Iri paki rinosanganisira matatu mesh anowedzera kuwedzera kufukidzwa kwewekiweki network kune anosvika mazana mana nemakumi matanhatu emamirimita. Iyo yakanaka kune dzimba hombe uko kune mapoinzi ayo WiFi isinga svike, kana kumahofisi. Nezvigadzirwa izvi unogona kuwedzera kufukidza nekuzvigovera mukamuri yese. Ivo vanoita sevadzokorori vechiratidzo uye vanozove manyuko ekuvhara kuitira kuti iwe ugone kunakidzwa nekubatana chero kupi ... Kunyangwe kana chete mairairi matatu atengeswa, anogona kuwedzeredzwa nemamwe mayunitsi kana iwe uchida iwo kune yakawanda yakazara mesh.
Makomputa, zvemagetsi, mafoni uye zvishongedzo
Mukuwedzera kune zvigadzirwa zveAmazon, iwe zvakare uchawana humwe hunyanzvi hwakawanda kuitira kuti uwedzere hupenyu hwako hwedhijitari:
Acer Aspire 3 A315-23: unogona kutenga laptop iyi chete 299 € uye pasina operating system kuti ukwanise kuisa yako yaunofarira GNU / Linux distro. Iyo ine 15.6 - FullHD skrini, AMD Ryzen 3 3250U processor, 4GB ye RAM, 128GB yeSSD, uye yakasanganiswa AMD Radeon mifananidzo. Chigadzirwa chakanakira hofisi otomatiki, kufamba, kana kudzidza mukati memazuva aya kubva kumba ...
APC BX700U-GR: ponesa 38% nhasi paChishanu Chishanu kune ino UPS kana UPS. Iyo isinga tsanangurike magetsi ekushandisa system, kuitira kuti ino nguva yechando kudzima magetsi kusakanganisa mutambo wako wemavhidhiyo mitambo, yako yekirasi basa, kana rako basa. Kunyangwe kana simba rikadzimwa, iwe ucharamba uine simba mubhatiri rako kuti zvishandiso zvako zvirambe zvichishanda sekunge pasina chimwe chinhu kwechinguva. Iyo ine akati wandei magetsi emagetsi ekubatanidza zvishandiso zvakasiyana, senge yekunze hard drive, yako router, PC yako, nezvimwe. Inodzivirirwa pamasaji, uye inosanganisira yakangwara shutdown software iyo inokuzivisa iwe kana bhatiri richizopera kuitira kuti zvese zvinyatso kuchengetwa. [Kunyangwe murondedzero yacho ichiti isabatanidze bhatiri, zvinoita sekunge rinosanganisira bhatiri zvinoenderana nemaonero evashandisi, zvinoshamisa kuti UPS haina kusanganisira bhatiri, uye zvishoma pamutengo iwoyo]
Bose Solo 5: 47% kuderedzwa mune ino ruzha bar yeTV yako. Teerera kune ako aunofarira mafirimu, akateedzana uye anoratidza zvisati zvamboitika, neiri bhaa kubva kune yakakurumbira Bose brand. Iyo ine 30W simba uye Bluetooth tekinoroji (iyo yakabatana neTV wired) kuitira kuti iwe ugone kuishandisa seisina waya mutauri kune ako emimhanzi reproductions.
WD Zvinhu 4TB: tenga izvi pa 42% kuderedzwa musi weChishanu Chishanu. Iyo compact yekunze hard drive kutora chero kwaunoda uye uve ne backup ye data rako. Iine hukuru hwakakura hwe4TB (4000 GB) uye iine USB 3.0 yekubatanidza yekukurumidza data kuchinjisa. Iyo haidi simba, inofambiswa kuburikidza neiyo USB pachayo.
VANOKOSHA Raspberry Pi 4 Kit- Kana iwe uchida Raspberry Pi 4, unogona kutora mukana weiyi. Iyo kit kit yakazara inosanganisira iyo 4GB Model B Raspberry Pi 4 SBC, 64GB SanDisk microSD memory kadhi, 3 inopisa sinks yemachipisi, 2 micro HDMI tambo, 5.1v 3A mhando C magetsi anowanikwa neOO / OFF switch, yekunze USB muverengi wekadhi, fan yeSoC, bhokisi reSBC, screwdriver yekumisikidza, bhuku reSpanish. Zvese zvaunoda kuti uunganidze yako Pi komputa uye utange kunakidzwa nayo
Logitech G920 Kutyaira Simba: a 50% kuderedzwa mune ino vhidhiyo mutambo weflaya kune simulators. Inogona kushandiswa kune ese PC (Mac, Windows, Linux) uye Xbox ine USB chinongedzo. Iri vhiri rakanakira yako aunofarira mitambo, ine ese anodikanwa mabhatani uye maactuator, mhando uye yakasimba kuvaka, uye Force FeedBack yeiyo chaiyo chaiyo vibration zvinoenderana nezvinoitika mumutambo wevhidhiyo ...
LG 55NANO806NA: ponesa 214 € neiyi 26% kupihwa. Iyo smart TV ine 4 ″ 55K NanoCell, ine Artificial Intelligence / Kudzidza Kwakadzika, WebOS 5.0 inoshanda system (Linux kernel) ine huwandu hwemaapplication muchitoro chayo kurodha pasi, QuadCore processor, Local Dimming, HDR 10 Pro, Ultra Yakakomberedza kurira, uye simba rekuita simba kirasi A.
Samsung Galaxy A21s: Iva ne 4% kuchengetedza pane yatove isingadhuri smartphone. Iyi mbozhanhare inosanganisira 48MP multisensor main camera (2MP focal, 8MP Ultra wide angle, 2MP macro) uye 13MP yekumberi kamera. Iine 6.5 ″ Infinity-O LCD skrini uye 720 × 1600 px resolution, 409 dpi pixel desindad, 8-core processor, 4GB ye RAM, 128GB yemukati memory, uye nekwanisi yekushandisa microSD makadhi anosvika ku512GB. Uye zvakare, inosanganisira 5000mAh Li-Ion bhatiri kune kuzvitonga kuzere, nerutsigiro rwe15W inokurumidza kuchaja uye Android 10.
Imba yakangwara nemidziyo
Chekupedzisira, iwe unogona zvakare kutenga, kune zvishoma, izvi zvigadzirwa zvinonakidza zve shongedza imba yako uye wochichinjisa kune iyo nyowani nguva:
Kuba Lund MC Mujaho 2: Iva ne 27% kuderedzwa. Chigaro chinoshamisira chehofisi yako, tafura, uye kugadzirira kuve wakasununguka sezvinobvira, kunyanya kune vatambi. Kana iwe uri mutambo wemitambo, iwe unofanirwa kuve neaya eaya. Nekugadzirisa, kuzunungusa mashandiro uye kutsenhama kusvika 155º, zvigadzikiso zvemaoko, mavhiri, uye jira repolyester.
TCKIN Wi-Fi Mini Smart Plug Kit- imwe mune ino smart plug kit. Aya mapuragi anotendera iwe kuti ubatanidze chero chaunoda, chero chishandiso, uye pamwe nemukana wekudzora kupihwa kune chakataurwa chishandiso nenzira ine hungwaru. Vanogona kudzorwa naSiri, Alexa, Google Mubatsiri. Izvo zvinosanganisirawo timer yekuvadzora. Ivo vanobvuma kusvika 16A uye 3300W.
Cecotec Conga 1090: na 42% kuderedzwa kuti utore robhoti kuitira kuti pasi pako pasare pasina gwapa. Iri robhoti riri 4 mu1, sezvo richitsvaira, vacuums, mops uye zvakare rinoteya pasi neyakaiswa dhipoziti. Iine matatu anogadziriswa ekutsvaira mazinga uye matanhatu ekuchenesa modhi (Auto, Edging, Chinyorwa, Kamuri, Spiral uye Kudzokera Kumba) uye matatu maitiro ekuita (ECO, Yakajairwa uye Turbo). Inogadziridzwa 3/6, ine iTech Smart 24 tekinoroji yekungwara kwekungwara uye mepu yemepu, kutonga kubva kune nharembozha, kana ne Alexa neGoogle Mubatsiri. Iyo zvakare ine hupenyu hwebhatiri hwe7 min, 2.0 Pa yesimba rekuyamwa, uye BestFriend Kuchengetedza system (yakakosha silicone bhurashi kubvisa bvudzi remhuka).
ANWIO E27 RGB- Tenga 4 pcs yeVachena Chiedza Makara RGB LED Smart Bulbs -16%. Iyo ine 14W uye 1350 Lumens, inoenderana ne Alexa, Google Mubatsiri, Smart Hupenyu / Tuya APP yekutonga kwako nyore. Ivo zvakare vane Remote control kuburikidza nharembozha yekudzora ruvara, toni, mashedhi, kure / on, nezvimwe Inosanganisira pati yemafashoni inoshandura ruvara zvinoenderana nerwiyo rwemumhanzi, yakanakira mapato epamba. Ehe, inogona kuiswa mune chero mwenje wakajairwa, haudi mwenje unokosha.
WUFU WF-010U: 20% kuderedzwa mune smart smart. Kiyi yekukanganwa nezvechinyakare makiyi. Dzinogona kudzorwa neanekure masimba ekudzora anowanikwa mune kit, kana neapp pane yako iOS / Android nhare, kana nekubata kuvhura kubva mukati. Inofambiswa ne USB kuitira bhatiri parinopera. Iyo inoshandisa iyo Tiger yekukiya yekuwedzera kuchengetedzwa uye inogona kuiswa pane chero musuwo kana hwindo zviri nyore.
Habitdesign 004604A: uye iwe unogona zvakare kutora mukana weChishanu Chishanu kutenga tafura yePC yako uye hofisi uine 18% kuderedzwa. Iine tafura yekudzidza yeAthena yekombuta yako, mabhuku, uye zvishongo, bhokisi remadhirowa, uye zviyero 138x74x60 (upamhi, kukwirira, kudzika). Zvese zvakagadzirwa neakakwira density mukotoni, yepamusoro melanin uye mukurumari. Certified neEFC (yeSpanish Association yeDondo Sustainability). Iyo iri chena, saka ichabatana zvakanaka nehukuru hwakawanda hweakasiyana masitayera uye kushongedza.
Rangarira kuti newewo unayo zvimwe zvinopihwa zveChishanu Chishanu, semuenzaniso muchitoro chiutsi yemitambo yemavhidhiyo yeLinux, kana iyo nzira ye Slimbook, Etc.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Akanaka Matema eChishanu Deals - Mhanya Vasati Vatengesa!
Windows 10 inogona kuenderana neApple maapplication muna 2021